Dhegeyso:PDRC,oo howlo Cilmi baaris ah ka wadda deegaano kamida gobolka Nugaal – Radio Daljir
Dhegeyso:PDRC,oo howlo Cilmi baaris ah ka wadda deegaano kamida gobolka Nugaal
Juunyo 11, 2015 5:10 b 0
Khamiis,Juun 11, 2015 (Daljir)—Sarakiil ka socota Ha\_’yadda Horumarinta cilmi baarista Puntland ee PDRC,aya maal-mihii lasoo dhaafay howlo u kuur-gal iyo cilmi baaris ah ka waday deegaano badan oo hoos yimaada gobolka Nugaal.
Qorshaha safarkan aya aha in la Oggaado baahiyaha ay qabaan dadka ku dhaqan deegaanada laamiga ka fog ee Puntland,iyadoona kooxda guur-guurta ee maqal-muuqaalka Ha\_’yadda PDRC,deegaanada ay safarka ku mareen kusoo bandhigeen muuqaalo isugu jira wacyi-gelin iyo baraarujin ku Aaddan deegaanka iyo sidi dadka deegaanku isaga kaashan lahayeen howlohooda masiiriga ah.
Cabdinaasir Maxamed Kabayare waa sarkaal-ka hogaaminaya kooxda ka socota Ha\_’yadda PDRC,ee ku howlan Barnaamijkan wacyi-gelinta ah,oo Daljir la hadlay waxaa uu sheegay in baahiyo kala duwan oo dhanka Asaaska nolosha ah ay kuso arkeen deegaanadi ay socdaalkooda ku mareen,Cabdinaasir dadka deegaanadaasi ku dhaqan waxaa uu ku Ammanay isku xirnaan iyo waliba Ololle lagu badbaadinayo deegaanka oo dadku ku howlan yihiin.
Cabdinaasir Maxamed Kabayare oo hadalkiisa sii wata waxaa uu sheegay in dadka reer guuraaga ah ee deegaanada gobolka Nugaal hoos yimaada ay kula kulmeen inay xil iska saareen ilaalinta deegaanka,iyagoo badbaadinta xoolo daaqeenka u xilsaaray ciidamo gaaraya ilaa 20-Askari oo dadka deegaanku iska soo xuleen kuwaasi oo ka hortaga wax kasta oo deegaanka dhibaataynaya.
Halkan ka dhegeyso Waraysiga.
Odayaasha gobolka Gardafuu oo qaylo dhaan kasoo saaray adeegyada bulsho ee gobolka iyo golaha xukuumadda